kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo is mari waayey kulankoodii North Londone Derby. – Cayaaraha dunida
Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa is mari waayeey kaddib ciyaar ku soo idlaatay 1-1 oo ka tirsaneed horyaalka Premier League .
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan ,kooxda Tottenham ayaana soo bandhigatay kubad ka wanaagsan qaab ciyaareedkii ay soo bandhigeen kooxda Arsenal qeebtii koowaad ee ciyaarta , balse kooxda Arsenal ayaa gool la timid qeebtii hore .
Aaron Ramsey oo saftay kulankii ugu dambeyey ee North Londone Derby ayaa u dhaliyey goolka kooxda Arsenal daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas ka caawiyey Alexandre Lacazette.
Tottenham ayaa sameesay isku dayo badan oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta lkn uma suura galin in ay gool u badalaan fursadahaas .
Bernd Leno oo shabqa u ilaaliya kooxda Arsenal ayaa sameyey labo bad baadin oo cajiib ah dhamaadkii qeebtii koowaad ee ciyaarta , ugu dambeen qeebtii koowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray 1-0 oo ay hogaanka ku heyso kooxda Arsenal.
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dame bee ciyaarta ,koooxda Tottenham ayaana ku soo gashay dar dar xoogan ugu dambeena waxa ay heleen goolka bareejada ee ciyaarta daqiiqadii 73-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyeye Hary Kane waxa uu ahaa gool rikoore ah.
Daqiiqadii 89-aad ee ciyaarta Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qasaariyeye rigoore loo dhagay kooxdiisa sidookale waxaa ciyaarta laga saaray Lucas Torreira oo loo taagay calaamada casaanka kaddib qalad uu ku galay Danny Rose. ugu dambeen kulankii adkaa ee North London Derby ayaa ku idlaaday bar baro 1-1